गाऊँखाने कथा - ३१ (Nepali Gau Khane Katha)
बसन्त जीलाइ भूंडी उत्तर
ब्लग संबाद निर्मलमणि अधिकारीसंग
जरुर म पागल भएँ
जनताको मन रुनु पर्ने हो
आँसुको भल बग्नु पर्ने हो , तर
हर्ष र खुशीले लुकामारी खेलेर होला
मातम पनि यहाँ पर्व बनेर छाएको छ
स्वबिनाशमा पनि उमंग पलाएको छ
सायदै , जनता यहाँ को बाँकि छ
निरन्तर केवल तमाशा र झाँकी छ
राजनीतिका गरा र फोक्टामा विभक्त
केवल, आफ्ना अभिष्टाहरूमा आशक्त
शठ , पाखण्डी अनि स्वार्थमा अनुरक्त
आरोपित विचारको नशामा अनुभुक्त
यहाँ मात्र राजनीतिका ठेकेदारहरू छन्
नाफा र नोक्सानका भागिदारहरू छन्
आन्दोलनका मेला भर्ने व्यापारीहरू छन्
आफ्नैहरूको भेलामा रम्ने लाचारीहरू छन्
बिनाशमा रमाउने धुन्धकारीहरू छन्
स्व-आल्हाद रम्ने अघोरीहरू छन्
मातृभूमिलाई चिथोर्ने फोहरीहरू छन्
देश अवशेष हुन लागेको बेला
जनताको मन रूनुपर्ने
तर, यहाँ सदैव उमंग नै छाएको छ
त्यसैले मातमलाई उसले पर्व मनाएको छ ।
गाउं खाने कथा ३१ को सही उत्तर हो कसार। सब भन्दा पहिला उत्तर मिलाउने पोस्तक जी ले गाउं पाउनु भयो। ल पोस्तक जी मन पर्ने गाउं माग्नुहोला।
चुलबुले टारमा बुरबुरे माटो, हातमा लुटुपुटु मुखमा गांठो, के हो?
यो गाउँखाने कथाको उत्तर पत्ता लगाएर गाऊँ माग्नुहोला। उत्तर जान्न गाह्रो परे अनुमान लगाएर भए पनि रमाईलो लिनुहोला।
नेपाली भाषा र सामाजिक जीवनको मौलिकपन झल्काउने अन्य रमाईला सामग्री भए , प्रस्तुत गर्नुहोला।
चाइन्जोकालाइ ह्यां भुडीको रमिता भइराको बेलां म के नरमिते कुरा गरौं। ए म त दौंतरीमा पो रहेछु। खास त बसन्त जी कै ब्लगमा उत्तर दिन लाग्या हो। तर प्रश्न भन्दा उत्तरै लामो हुने हो कि भनेर फेरी यै दौंतरीमा आइपुगें। बल्ल बल्ल हिजो बांदर कथा लेख्ने भ्याको थिएं। अब एक हप्तालाइ ब्लग लेख्ने कोटा पुग्यो भनेको यो भूंडीको उत्तर भने नलेखि रहन सकिन।एक मन त बसन्त जी को भुंडी ले गती छाडेछ म पनि त्यी भूंडी पूराणमा रंगियु कि जस्तो लाग्यो। तर भन्छन नि असल साथिले नाका फोहोरलाको तुरुन्त भनिहाल्छ रे। अरु भने मुसुमुसु हांसेर मात्र बस्छन् रे। यसो भुमिका बांधेको आफ्नै कुथुरो पोख्न हो के। खै कुरा बुज्या?
स्कुल पढ्दा दिनमै २-३ घण्टा पढिन्थ्यो। खै धेरै हिंडेर हो कि के हो स्कुल क्यामपस पढ्दा सम्म हात खुट्टा सधै खिरीला भए। मोटा साथी देख्यो कि खुब डाहा लागेर आउने। कक्षा १० मा एक जना मोटी साथी थिइन। ज्यान मात्रै आलू जस्तो थिएन पढाइ पनि करिब करिब आलु नै थियो। सारै दिक्क लागेर होला तिनकी आमा स्कुलमै आएर माडसाब सं गुनासो गरिछिन - खाना खाए पछी सुत्छे,स्कुल जाने बेलामा बल्ल उठ्छे। बल्ल मोटोपनको रहस्य खुल्यो। मोटाउने फर्मुला थाहा पाएर म त्यसै दंग थिएं। मलाइ पनि लाग्यो एस.एल.सी त सकियोस अनि मैले जान्या छु। दिन,महिना गर्दै एस.एल.सी पनि सकियो। अब भने म मोटाउनको लागी एकाग्र भएको थिए। कम्तिमा पनि म १३-१४ घण्टा सुत्न थालें। मोटाउने भइयो भनेर म त्यसै फुलेल थिएं। हिउंद मासा,गाउं घरमा काम पनि नहुने,एस.एल.सी पनि सकयो पढ्ने त कुरै भएन। कि खाने कि सुत्ने मेरो दिनचर्या त्यही हुन थाल्यो। खै के कुरा मिलेनछ म त २ हप्ताको लामो सुताइ पछि बिरामी पो भएं। अलि अलि ज्वरो आउने र ज्यान दुखेर चलाउनै नहुने भयो। मलाइ यकिन भयो यो मोटाउने फर्मुला गलत पर्यो भनेर। त्यस पछी भने मोटाउने रहर कहिल्यै लागेन।
अमेरीका आएपछि भने यै खिरीलो शिरर आकर्षक भयो। ह्यां त कुरो उल्टो पो रहेछ - जती दुब्लो उती राम्रो। मन मनै सोचें धन्न त्यती बेला बिरामी भइएछ नत्र भने त यो अमेरीमा बिजोग नै हुनेरहेछ। पहिलो त कालो कपाल देख्ने बितिक्कै मान्छेहरु मुन्टो उता फर्काइहाल्छन। झन मोटो भए त कुरै नगरौं। एक दुइ जना मोटे साथीहरु गुनासो पोख्थे जे खाए पनि घटिंदैन। मन मनै सोच्थे आफु त दुब्लै छु के रे तिमीहरु जे सुकै खाऔ। तर जब जागिर खान लागियो त्यस पछी भने आफुलाइ पनि त्यही दशा सुरु भयो। २-३ महिना भयो म मोटोपन घटाउने अध्ययन तिर लागेको छु। तर आफ्नो तौल भने घट्ने तरखर देखिदैन। तौल भन्दा पनि ठुलो समस्या त्यही भूंडीमा गएर अड्किएको छ। फेरी बसन्तजीको ब्लगमा पनि त्यही भूडीको महात्मा जांदै रहेछ। अब भने बसन्त गुरुको गणेश बनेर महात्मामा भाग लिने निधो गरें।
मुल मन्त्र त अल्छीको कुरो जैसीले जान्दैन। त्यो मन्त्र यी हड्डी मात्रै भएका हातमा मासु थपिए पछी खुलस्त भयो। जब लाउने गरेका पाइन्टहरु पेटी नगाउनु पर्ने भयो त्यती बेला सम्म त हाइसन्चो भएको थियो। पेटी लगाउन भुले पनि खासै फरक नपर्ने भो। जब पाइन्टका टाक नै लगाउन नमिल्ने भो त्यस पछी भने केही गडबढ भहेको महशुस भयो। आफ्नै शरिरको जांच आफैंले गरें। एउटा साथीले प्वाक्क बोलीहाल्यो - जिउ त ठिकै छ भुंडी भने अलि घटा है। अब जांचबुझ गर्नै नपर्ने भो। कुरो आएर अड्कियो यही भूंडिमा। कहिल्यै जिउ घटाउन नपर्ने सोच भएको मान्छेलाइ परेन अब समस्या? यही भुडी घटाउने धुनमा भोगेका अनुभव एकै हरफमा लेख्दै छु है।
ब्याम गर्दैमा भूंडी घट्दैन। नपत्ताए यो नक्शा हेरौं एउटा पाउरोटी पचाउन कती उफ्रनु पर्नेरहेछ। जिउ मात्र होइन भूंडी घटाउन खानाको मात्रा घटाउनै पर्दछ। त्यसमा पनि चिल्लो,गुलियो निमीट्यान्न नै पार्नुपर्दछ, मासू पनि कम गरेकै बेस। एकै पटक भन्दा एक दिन दुइ दिन गरेर खाना घटाउंदा सघाउ पूग्दछ। सुत्नु भन्दा ३,४ घण्टा पहिलै खाएको निकै उत्तम। खाजामा सलाद खांदा भुंडीलाइ मात्र असर पर्ने होइन की जिउ नै चंगा हुन्छ। ब्याम गर्दा तौल तथा भूडी घटाउन सहयोग गर्दछ र जिउ फूर्तीलोको साथै तनाब मुक्त बनाउंछ। भुडींमा जोड पर्ने खालको ब्याम गरेर अझ सुनमा सुगन्ध। छोटो तर मलाइ प्रभावकारी भएको अनुभव थाहा भए पनि नभए पनि भुडीं घटाउने कार्ययोजनामा समाबेश गर्नुहोला,यस्ले कस्तो ल्याउंछ परिणाम अर्को पटक ब्लगमा भलाकुसारी गरौंला।
फोटो स्रोत: टाइम पत्रीका
Within the never ending process of formation and termination
Let’s enjoy some of the waves rolling towards the shore,
Luck has favored us; at least the tides kiss our feet in realism
Look sweetie, life resembles this process, uncertainty of less or more.
Have this moment rejoiced, who knows the future ahead?
The circumstances weaved within the womb of nature and fate,
Gratefully, let’s offer our gratitude to nature for having our wishes read
Let the child play with all its might, let it be glee and no more afraid.
You have an era to be me-alot more to face gain you own experience
Yet, you have nothing to pretend, and just be yourself-atrue kid
Let me be your friend, resemble your character and enjoy, at least for this moment
Hold my hands and let this flood sway me away from all my anxiety and anguish.
Not till distant horizon comes into sight- so vast is the source to learn and discover
Let’s face and count the waves, and learn the ways of survival from the sea-birds,
Let my never growing kid play at this instance, let it roll with the fizz and get wet all over
As forced maturity is my shadow, waiting to overtake me behind this beautiful Atlantic world.
(Once published in my blog, I have presented for dautari readers)
Posted by: Anjali... Labels: गीत/ गजल/ कविता
दौंतरीको ब्लग भित्र ब्लग स्तम्भमा नेपाली ब्लगरलाइ निम्ताउने गर्छौं। यसले ब्लगर बिच भाइचाराको कायम हुनुको साथै उदायमन ब्लगरलाइ थप परिचित गर्न मद्दत गर्छ। अत दौंतरी आफैमा ब्लग चौतारी भएकोले अन्य ब्लगरको सफलता नै दौंतरीको सफलता हो। यस पटक प्रध्यापन पेशमा संलग्न ब्लगर निर्मलमणि अधिकारीलाइ निम्ताएको छु। आउनुहोस वहाँसंगको कुराकानीमा लागौं ।
१ ब्लग लेख्ने रहर कसरी जाग्यो ?
सन् २००६ जनवरीदेखि ब्लगिङ् थालेको हुँ । त्यतिखेर म आमसंचार र पत्रकारिता प्राध्यापन गर्थेँ र अनलाइन न्यूजपोर्टलको सम्पादक थिएँ तर पत्रपत्रिकामा नियमित स्तम्भलेखनको काम भने बन्द गरिसकेको थिएँ । ब्लगका विशेषताबारे विद्यार्थीहरुलाई बताउँदा बताउँदै आफूलाई पनि यसले आकर्षित गरेको म सम्झन्छु ।
त्यतिबेला मैले मूलतः तीनवटा उद्देश्यहरु राखेर ब्लगिङ् सुरु गरेको थिएँ । एक विद्यार्थीहरुका लागि पाठ्यसामग्री तथा गृहकार्यहरु राखिदिन साइबरस्पेसलाई प्रयोग गरौँ भन्ने उद्देश्यले । दुई आफ्ना पूर्वप्रकाशित सामग्रीहरुलाई डिजिटल स्वरुपमा संरक्षण गर्न सकिने र नयाँ पाठकहरुसमक्ष पुर्याउनसमेत सकिने भएकाले । तीन केही समसामयिक टिप्पणी लेखियो भने त्यसलाई पनि पोस्ट गर्ने भनेर ।
२ तपाईँको ब्लग पूर्वतिर जाने भनिएको रहेछ पूर्वमा त्यस्तो के छ जो पश्चिममा छैन ?
यहाँ मैले पूर्व भनेर वैदिक हिन्दू विचारधारालाई जनाउन खोजेको हुँ । पूर्वमा धर्म अर्थ काम र मोक्ष यी चारैवटा पुरुषार्थलाई समान महत्व दिइने समष्टिकृत दार्शनिक संश्लेषण छ जुन पश्चिममा छैन ।
३ तपाईँको ब्लग धरातल कसरी फैलिएको छ ?
यतिखेर मेरा पाँचवटा ब्लगहरु साचालनमा छन् । मेरो पहिलो ब्लग http://nirmalamani.blogspot.com/ मा दार्शनिक धार्मिक सांस्कृति एवं सामाजिक सन्दर्भमा लेखिएका सामग्री छन् । अर्को एक ब्लग http://maharshidhaumya.blogspot.com/ मा मेरा साहित्यिक रचना समेटिएको छ । तेस्रो ब्लग http://nirmalam.blogsome.com/ मा नेपालमा जातीय भाषिक साम्प्रदायिक सवालबारे मेरा लेखहरु राखिएका छन् । चौथो ब्लग http://sadharanikarantheory.blogspot.com/ मा साचारसम्बन्धी मेरा मौलिक अनुसन्धानमूलक सामग्री राखिएका छन् । यसमा संख्यात्मक रुपमा सबै भन्दा थोरैवटा पोस्टहरु प्रकाशित छन् । पाँचौँ ब्लग http://adhikary.wordpress.com/ लाई मैले माथि उल्लेखित चारैवटा ब्लगहरुको समष्टिकृत साइटका रुपमा विकास गर्न खोजिरहेको छु ।
४ तपाईँको ब्लगको स्वरुप कसरी निर्धारण गर्नु भएको छ ?
यस प्रश्नको उत्तर माथि पनि केही मात्रामा आइसकेको छ । थप भन्नु पर्दा मेरो पहिलो ब्लग ज्योतिर्गमय- A Movement toward East मा धेरै समयसम्म विद्यार्थीहरुका लागि पाठ्यसामग्री तथा गृहकार्यहरु पूर्वप्रकाशित सामग्री तथा समसामयिक लेखोट यी सबैखाले सामग्री राखिन्थ्यो । पछि अन्य पोस्टहरु डिलिट् गरेर दार्शनिक धार्मिक सांस्कृति एवं सामाजिक सन्दर्भमा लेखिएका सामग्री मात्र राखिएको छ ।
५ धर्म अध्ययन अध्यापन लेखनमा के समानता असमानता भेट्नु भयो ?
मेरो दृष्टिबिन्दुबाट हेर्दा यी सबै मेरा कर्म हुन् त्यसैले उस्तै हुन् ।
६ धर्मलाई अफिम किन भनिएको होला ?
यो भनाइ अन्यत्रको सन्दर्भमा भनिएको हो भारतवर्षको सन्दर्भमा होइन । कार्ल माक्स्रले समाजको अध्ययन गर्ने क्रममा खासगरी पश्चिमा मुलुकमा धर्मका नाममा कतिपय अन्धविश्वासी कामहरु भएका र कट्टरता रहेका परिप्रेक्ष्यमा त्यसो भनेका थिए । भारतवर्षमा खासगरी वैदिक परम्परामा धर्म भन्नाले जीवनपद्धति बुझिन्छ ।
७ भगवानको अवतार साँच्चै हो कि यो रावणले रामलाई भनेजस्तो जादूगरी हो ?
दुवै कुरा हुन् । कतिपय अवतार साँच्चै हुन् भने कतिपयले जादूगरी वा अन्य शक्तिको आडमा अवतार भएको दाबी गरेर भ्रम फैलाउन सफलता पाएका पनि छन् ।
८ थुप्रै पुस्तक लेख्नुभएको छ सबैभन्दा सफल पुस्तक कुनलाई मान्नु हुन्छ ?
बजारको मापदण्डअनुसार भन्ने हो भने आमसाचार र पत्रकारिता नै सबैभन्दा सफल पुस्तक हो । यो पुस्तकको पहिलो संस्करण वि.सं. २०६० मा प्रकाशित भएको थियो र भर्खरै पाँचौँ संस्करण प्रकाशित भएको छ । पुनर्मुद्रणलाईसमेत हिसाब गर्दा यो धेरै नै बिक्री भएको पुस्तक हो । चर्चाका हिसाबले भन्ने हो भने आस्थाको शान्ति-युद्ध वि.सं. २०५७ ले राष्ट्रियसाथै अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पायो ।
९ पत्रिकामा लेख्दा र ब्लगमा लेख्दा कस्तो फरक अनुभव गर्नु हुन्छ ?
लेख्दाको अनुभूति उस्तै हो । सार्वजनिक भइसकेपछिको अवस्थामा पत्रिकाका सन्दर्भमा धेरै पाठकले पढेको पाइन्छ तर ती देशभित्रका मात्र हुन्छन् । ब्लगका सन्दर्भमा पाठक संख्या कम हुन्छ तर ती पाठकहरु संसारका विभिन्न ठाउँका हुन्छन् ।
१० विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका अझै पनि In God We Trust भन्ने भनाइमा अडिग छ नेपालजस्तो अविकसित देश भने धर्मबाट टाढिँदै छ । यो गरिबी हो कि अज्ञानता ?
नेपालमा गरिबी अज्ञानता र हीनताभाष जस्ता आन्तरिक कारण र वैश्विक स्तरमा रचिएको व्यूहचक्र ग्राण्डडिजाइन का कारण धर्मद्रोही विचार र व्यवहारले मौलाउन पाएका हुन् । जसले आफ्नो धरातल मजबुतसँग टेक्छ उही शक्तिशाली हुन्छ । ढिलोचाँडो सबैले आफ्नो जरो नजगाई धरै छैन ।
११ नयाँ धर्मावलम्बीहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ तर हिन्दूको संख्या जसका तस छ । यस्तो किन भएको ?
संख्या बढाउनुलाई नयाँ धर्मावलम्बीहरुले विशेष प्राथमिकतामा राख्ने गर्छन् । यसका लागि बाह्य सहयोग पनि जुटिरहेको हुन्छ । मूलबासीहरुले पत्तो नपाइन्जेल यस्तै हुन्छ ।
१२ धर्म र नैतिकतामा के फरक छ ?
धर्म बृहद् प्रणाली हो जसले समष्टि जीवनपद्धति बुझाउँछ । नैतिकता त्यसको अनिवार्य अंग हो । नैतिकताबिना धार्मिकता हुँदैन ।
१३ नेपालमा तन्त्रको बोक्रोमाथि बोक्रो थपिँदै जाँदा धर्म किन भने क्षीण हुँदै गइरहेको होला ?
धर्म त किन क्षीण हुन्थ्यो र त्यो तत्व त अक्षण्ण छ । मानिसहरु त्यसबाट टाढिने र त्यसको फलस्वरुप अधर्म अनैतिकता अशान्ति बढ्ने चाहिँ हुन्छ ।
१४ अन्य ब्लग कत्तिको सयर गर्नु हुन्छ कस्तो अनुभव छ तपाईँको ती ब्लगप्रति ?
गर्छु । कतिपय त नियमितजसो नै हेरिन्छ । तिनको सामान्यीकृत टिप्पणी गर्न सकिन्न । कतिपय आफ्ना उद्देश्यमा प्रष्ट छन् कतिपयले रहरै रहरमा गरिरहेका छन् ।
१५ तपाईँले दौँतरीलाई के सुझाव दिनु हुन्छ ?
मैले बेला बेलामा हेरिरहने साइटमध्ये यो पनि पर्छ । धेरै किसिमका पठनीय सामग्रीहरु समेटिएका छन् । यसलाई कायम राख्दै थप विविधता ल्याउन सकोस् ।
१६ तपाईँलाई भन्न मन लागेको तथा मैले सोध्न छुटाएको त्यस्तो केही कुरा छन् कि ?
ब्लगको उपयोगिताअनुसारको प्रतिफल हामीले लिन सकिसकेको स्थिति होइन अहिले । त्यसैले यसको दोहनलाई मात्रात्मक र गुणात्मक दुवै आयाममा वृद्धि गर्न थप गहकिला प्रयत्नहरु गरौँ ।
- आयुष चौधरी सम्मोहन
- रझेना ५ बाँके
- हाल रेडियो जन आवाज एफ। एम। ९७।३ नेपालगाज बाँके
सेताम्य हिँउ बोकेका पहाडहरु
रमाईरहेका मेरा सपनाहरु
तर म किंचित पनि डगमगाएको छैन
सपना देख्नकालागी हुन्छन्
उज्यालो सपना तोड्नकालागी हुन्छन्
सपना चिस्सिएर चरचरती फुटेपिन
फेरी रातको प्रतिक्षामा
थालेकोछु लामो अथक यात्रा हिमयुगतिरको ।
यात्रा लामो छ कठिन पिन
पर्न सक्छन् मुसलधारे वर्षा अबरोध बिना
चिरा फाट्न सक्छन् बाटाहरुमा
बिस्फोट हुन सक्छन् ज्वालामुखी लाभाहरुमा
चिन्न नसकी आफ्नै अस्मिता
बेराउन सक्छन् बेडी र जन्जिर शरिरमा
आँशु भेलको यो सामुन्द्रीक यात्रा
तर पनि म तय गर्दैछु
ति सेताम्य हिँउ बोकेका पहाडहरु देख्ने अभिलाषामा ॥
जहाँ नैतीकताको अभाव र
बेइमानीको भेल हुन्छ ।
विश्वकै अनुपम व्यबस्था पनि
त्यस ठाउँमा फोहोरी खेल हुन्छ ।
न नियम तोडनेलाई सजाँय
न आपसी मर्यादा र मेल हुन्छ ।
स्वच्छतालाई पनि फोहोर बनाएर
फोहोर माथि फोहोरी खेल हुन्छ ।
यो खेलमा सधैं झेल हुन्छ ।
कहिले एउटै टोलीमा फुट त
कहिले कुकुर बिरालोको मेल हुन्छ ।
कहिले आफ्नै खेलाडीले धोका दिएर
आफ्नै पक्षसंग तोल-मोल गर्छन ।
कहिले विपक्षीले पनि ‘पोका’ लिएर
जानी जानी आत्मघाती गोल गर्छन ।
जित्ने टोलीका खेलाडीहरु
खेललाई जतीसक्यो लम्बाउन खोज्छन ।
हार्ने पक्ष भने ढुङ्गा मुडाले
अर्काको शिल्ड पनि हत्याउन खोज्छन ।
कहिले जर्सी पनि साटासाट हुन्छ
कहिले मुक्का र लाता-लात हुन्छ ।
न नीति न तर्कको बात हुन्छ
केवल तथानाम र काटाकाट हुन्छ ।
साम, दाम, दण्ड अनि
जहाँ पाईला पाईलामा झेल हुन्छ ।
पुरानै फोहोरी खेल हुन्छ ।
विश्वकै उत्कृष्ट व्यबस्था पनि
त्यस ठाउँमा फोहोरी खेल हुन्छ
जरुर म पागल भएँ मेरी मायालुकै मायामा
म ती स्मृतिलाइ समाउन खोज्छु उन्कै छायामा
होस मै छु म हरेक शब्दमा उनैलाइ नै देख्दछु
मन परीदृश्यहरुमा भेटी उनैका गित लेख्दछु
फुलको बास्नाको स्वाद लिन्छु गहिराइमा डुब्छु
मृत्युलाइ पनि छलेर म उन्कै परेलीमा नै लुक्छु
जरुर म पागल भएँ………………………
म जीवनको अबशेष खोज्दछु उन्कै छायामा
स्वर्ग कही कतै छैन नी चोखो माया नै हो स्वर्ग
जाहाँ जस्ले आत्माहरु रुवाउछन बरु त्यही हो नर्ग
म बोल्दछु सपनामा अनी चाँदनी त्यो हर रातमा
उनी आत्मा हुन मेरी म मरे पनि हुन्छिन साथमा